İzmir Narlıdere Metrosu 2022 Sonunda Hizmete Açılacak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[03 / 11 / 2019] မေလ 2018 မှစ၍ Crimean တံတားမှ 8 သန်းပေါင်းများစွာယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားသည်	380 ရိုင်း
[03 / 11 / 2019] ခရီးသည်တင်ရထားများကိုစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်အောင်ပြုလုပ်ပါ	06 တူရကီ
[03 / 11 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[03 / 11 / 2019] Kocaeli ရှိမင်္ဂလာသင်္ကေတများပါသည့်ဘတ်စ်ကားများ	41 Kocaeli
[02 / 11 / 2019] New Generation Wagon အတွက်ဂျာမနီမှTÜDEMSAသို့တောင်းဆိုရန်	58 Sivas
[02 / 11 / 2019] Trabzon Erzincan မီးရထားစီမံကိန်းအရေးကြီးသတင်းစကား .. !	24 Erzincan
[02 / 11 / 2019] Konya မက်ထရိုအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုး!	42 Konya
[02 / 11 / 2019] TÜVASAŞသည် National Train Project တွင် 12 အင်ဂျင်နီယာများကိုစုဆောင်းနေသည်။	54 Sakarya
[02 / 11 / 2019] ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းသစ် USA သို့သမိုင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်	1 အမေရိကတိုက်
[02 / 11 / 2019] Alarko သည်ရိုမေးနီးယားရှိ4ဘီလီယံပေါင်မီးရထားတင်ဒါရှုံးသည်	40 ရိုမေးနီးယား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirmirzmir Narlıdereမြေအောက်ရထားကို 2022 ၏အဆုံးတွင်အသုံးပြုမည်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
izmir narlidere မက်ထရိုဝန်ဆောင်မှုကိုအဆုံးမှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
Fahrettin Altay-İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်Narlıdere Metro တွင်လုပ်ငန်းကိုအနှောင့်အယှက်မရှိဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 2022 တွင်ပြီးစီးမည့်စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုများကိုပြသသည့်နိဒါန်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Soyer ကပြောကြားသည်မှာ ede သည်အကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းတွင်ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
Izarl မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer၊ Izmir၊ Narlıdere Metro တို့သည်Narlıdereမြို့တော်ဝန် Ali Engin၊ Balçovaနှင့်Narlıdereခရိုင်ကောင်စီဝင်များအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ခရိုင်အကြီးအကဲများအားပြောကြားခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေထူထပ်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်များထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည့်သမ္မတTunç Soyer သည်မြေအောက်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ muhtars နှင့်ကောင်စီ ၀ င်များ၏မေးခွန်းများကိုလည်းဖြေကြားခဲ့သည်။ TBM ဟုခေါ်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အတူမြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်ပါ ၀ င်သူများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အလည်အပတ်ခရီးမတိုင်မီတင်ပြချက်အရBalçovaဘူတာတွင် 415 ယာဉ်များအတွက်ကားရပ်နားရန်နေရာနှစ်ခုနှင့် 223 ယာဉ်များအတွက်ကားရပ်နားရန်နေရာ ၂ ခုကိုNarlıdereခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်ဆောက်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ Bornova EVKA-3 မှNarlıdereသို့မြေအောက်ရထားစီးနေသည့်ခရီးသည်သည်အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာသွားနိုင်သည်။ mirzmir ရှိ Eco-friendly ရထားလမ်းစနစ်ဖြင့်ခရီးသည် 186,5 ကီလိုမီတာသို့ရောက်လိမ့်မည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်၎င်း၏တိုးချဲ့သောမက်ထရိုကွန်ယက်နှင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုထပ်မံလျှော့ချရန်နှင့်ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းဖြစ်စေသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။ Metro လိုင်းအသစ် 7,2 သည်ကီလိုမီတာရှည်လျားမည်ဖြစ်သည်။ Balçovaခရိုင်မှNarlıdereခရိုင်မှစပြီးလိုင်းတစ်ခုလုံးသည်မြေအောက်ဖြတ်သန်းသွားရမည်ဖြစ်သည်။ 1 open-close ဘူတာများ၊6မြေအောက်ဘူတာများ၊4ကတ်ကြေးများဥမင်များ၊9ထုတ်လုပ်မှုတံတားများနှင့်2သိုလှောင်ရေးလိုင်းများကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
နိဒါန်းအစည်းအဝေးတွင် zmir Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန်Tunç Soyer က“ ဒီစီမံကိန်းဟာ mirzmir ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားနေတယ်။ ပြက္ခဒိန်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြီးဆုံးသေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာမြေအောက်ရထားကိုအဆိုးရွားဆုံးလုပ်အားနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအားထုတ်မှုကိုထောက်ခံတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တူရကီအတွက်ကုမ္ပဏီ၏GÜLERMAK medar ဝါကြွား။ ကမ္ဘာ့စံပြစီမံကိန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့နည်းပညာကိုငါတို့သုံးတယ်။ ” Soyer ကပြောကြားရာတွင်အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးသောမြို့သည်ဆင်းရဲသားများမောင်းနှင်သည့်မြို့မဟုတ်သော်လည်းချမ်းသာသူများပင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် railzmir ကိုမီးရထားလမ်းနှင့်မြေအောက်ရထားဖြင့်ဆက်လက်တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 2022 ရဲ့အဆုံးမှာငါတို့အတူတူဖွင့်မယ်
155 ဂဏန်း 30 မီတာမြေအောက်
Izmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer၊ မြို့တော်ဝန်များ၊ ကောင်စီဝင်များနှင့်မြေအောက် 30 မီတာများ 155 သည်မြေပြင်ပေါ်ရှိလုပ်ငန်းများကိုလှေကားထစ်ဖြင့်လှေကားထစ်ဖြင့်ဆင်းလိုက်သည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ 600 မီတာကလူသည်အသက်ရှင်အဆိုးမြင်၏ရှေ့မှောက်တွင်မျှော်လင့်ကြောင်းအရပျရှိနေစဉ်ဒီတော့စစ်ပွဲထဲဝငျဖို့တူရကီ၏အစီအစဉ်ဖို့ "တစ်ဦးပုံပြင် Soyer တိုးတက်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဿုံ functioning ရပ်တန့်နှင့်ဖြစ်ကောင်းဤစီမံကိန်းပွေးဆက်လက်သည်အဘယ်မှာရှိနေရာအများအပြား၌တည်၏။ အင်ဂျင်နီယာ၊ အလုပ်သမား၊ ထိန်းချုပ်သူ၊ ခြောက်လအတွင်းတွင်, 50 ကျော်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရရင်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းဟာပိုပြီးမြန်ဆန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလတခုကို ၀ င်ရောက်ပြီးပိုပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်မယ်။ ”
တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သောNarlıdere Metro ရှိ TBM ဟုခေါ်သောကြီးမားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပျံ့နှံ့စေသောစက်နှစ်ခုအနက်မှစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုကဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သောယာဉ်ကြော၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လူမှုဘဝပြproblemsနာများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ ခေတ်မီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသည်လည်းပိုမိုလုံခြုံသောဥမင်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
100 မီတာတစ်ခုစီသည် 6,6 မီတာနှင့် 450 မီတာအချင်းရှိသည့်တစ်ခုချင်းစီသည်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 20 မီတာဖြစ်စေမည်။ တိုးတက်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းများတွင်ကမ္ဘာတွင် ပို၍ အရေးကြီးသောတီဘီများသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြောင့်“ မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစက်ရုံများ” ဟုလည်းခေါ်သည်။ အများပြည်သူအသုံးအနှုန်းအရဤ“ ကြီးမားသောမှဲ့” များသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အထောက်အကူများကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။ TBM များသည်သူတို့၏ထူးခြားသောစွမ်းအားဖြင့် Hard Rock မြေအခြေအနေနှင့်၎င်းတို့၏စွယ်စုံဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်နှင့်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 100 သည်မီတာအရှည်ရှိပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားအရ TBMs သည် Airbus 72 မီတာခရီးသည်တင်လေယာဉ်ထက်ပင်ကျော်လွန်သည်။
အက်ဇ်ဒီမီတာ၏4အဆင့်ဖြစ်သောအက်ဖ်အဲလ်တဲတာ - နာရီဒီဒါလိုင်း၏အုတ်မြစ်သည်ဇွန် 10 တွင်တည်ရှိသည်။ တင်ဒါစျေးနှုန်းမှာ 2018 ဘီလီယံ 1 သန်း TL ဖြစ်ပြီးအလုပ်၏ကြာချိန်ကို 27 လများအဖြစ်စီစဉ်ထားသည်။ 42 ဘူတာများပါ ၀ င်သောလိုင်းတွင်Balçova, ğağdaş, Dokuz Eylülတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ အနုပညာဌာန (GSF), Narlıdere, Sites နှင့်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏မှတ်တိုင်များပါ ၀ င်သည်။
Narlıdereİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြေအောက််ဆောင်မှုများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ Kocaoglu, 27 / 12 / 2016 Kocaoğlu, Narlıdere Metro Izmir မြို့ပြအဆောက်အအုံများကိုပြီးမြောက်လိမ့်မည် - Izmir မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Aziz Kocaoglu, နှစ်သစ်ကူးပြီးနောက် Narlidere မက်ထရိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါတင်ဒါခေါ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ပါဝါနှင့်အဆောက်အ ဦ များနှင့်အတူလုံးဝထွက်သယ်ဆောင်လိမ့်မည် ...
Canakkale တံတား 1915, 18 မတ်လ xnumx` ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် 26 / 03 / 2018 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ahmet Arslan သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သော2akkanakkale တံတားအားပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သော 23 ထောင်ပေါင်း 1915 မီတာအလျားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
မတ်လ 1915 18 2022 တံတား Canakkale ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် 07 / 05 / 2018 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ahmet Arslan ကကွဲပြားခြားနားသောနာမည်၊ ခြေထောက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မျှော်စင်အမြင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် 1915 akkanakkale တံတားအား 18 မတ်လ 2022 တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 1915 akkanakkale တံတားပေါ်ရှိ Arslan …
Izmir Metro အက်ဖ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ AltaiSerbo-Narlıdereခရိုင်ဝန် 26 / 10 / 2017 İzmir Subway F. Altay-Narlıdere Sub-District ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါဤတင်ဒါဖိတ်ကြားချက်သည် 21 ဒီဇင်ဘာ 2016 ၏ ၀ ယ်ယူမှုအသိပေးစာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဤစီမံကိန်းအတွက်အထွေထွေဝယ်ယူရေးသတိပေးချက်အတိုင်းဖြစ်သည်။
အက်ဖ် Altai Narlidere Izmir Metro တိုးချဲ့မှု (တိုက်ရိုက်) 02 / 11 / 2018 İzmir Metrosu F. Altay Narlıdere Uzatması hakkında canlı yayınımıza hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temelini attığı Narlıdere Metrosu'nda 7.2 kilometre uzunluğundaki hat, kısaca "TBM" adı verilen2tünel açma makinesiyle…
Trabzon Erzincan မီးရထားစီမံကိန်းအရေးကြီးသတင်းစကား .. !
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးAkbıyıkသည် Hakkari Ski Resort တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်
Smart City Planning Workshop ကို Kayseri တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
Ray Care ရထားကိုရှာနေသည့်အမျိုးသမီးသည်သူသည်ဂီတကိုနားထောင်စဉ်သူမသေဆုံးခဲ့သည်
Narlıdereİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြေအောက််ဆောင်မှုများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ Kocaoglu,
Izmir Metro အက်ဖ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ AltaiSerbo-Narlıdereခရိုင်ဝန်
အက်ဖ် Altai Narlidere Izmir Metro တိုးချဲ့မှု (တိုက်ရိုက်)
ဖွင့်လှစ်narlıdere viaducts နှင့် Interchange ဝန်ဆောင်မှုအခမ်းအနား
Fahrettin Altai - Narlıdereနာရီအင်တာမီလန်စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းခုနှစ်သည်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်မှတက်ပြီသတ်သွားပါပြီ
Üçkuyular-Narlıdereမက်ထရိုတင်ဒါ flash ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
လက်ျာnarlıdereမက်ထရို (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကိုဒုတိယခြေလှမ်း
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (43) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (510) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
လမ်း - ဖလား5။ ခြေလျင်ကြည်းတပ်ပြိုင်ပွဲသည် Ceromonic Start ကိုစတင်ခဲ့သည်